1 Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba?
ipapashwe 28th UCanzibe 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Uncategorised.
Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, a Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye pitch eluhlaza, can red-green col­our-blind people play crick­et successfully?
Andikwazi ukucinga ukuba kutheni izitya ezinokuthi zenziwe kakubi, kodwa bekwenza nokuganga kungaba nzima kakhulu. Nge emehlweni-screen naziphi na iingxaki kufuneka incitshiswe, kunye ezininzi iintlanzi entsimini babe isibhakabhaka nje umzobo, kodwa khona kuya kubakho amaxesha apho ibhola kufuneka kube nzima ngakumbi ukuba zikhethe. ke, zininzi abadlali kwi eliphezulu kwinqanaba lombala-blind? Kubonakala ukuba le Australia wandibetha kuyo, yaye sele kwenziwe le sihlume nzima ukuba awuphendule lo mbuzo. isiphetho: kumanqanaba uninzi lwabantu umbala-iimfama zimelwe ngokuhambelana inani labo labantu (ngeenxa 10%), kodwa kumanqanaba aphezulu kakhulu kukho phantse akukho bantu umbala-abangaboniyo kwaphela (Bill Ponsford inokuba Kwimeko ongasetyenziswayo kuyo lo mgaqo. Le legend Aussie wadlala 29 test elithelekiseka kwi-avareji 48). Kubonakala ukuba kumanqanaba aphezulu kakhulu ukuba umbala-iimfama sisithintelo ebalulekileyo. Kuwo onke amanqanaba, abadlali ngemibala-nangobumfama bakufumanisa kunzima ukubona ibhola liphela ingca, isalusa ukuphepha phakathi kunye nezikhundla ukuganga olunzulu - abathetheli phawula! Ezinye izifundo lubonise ukuba Abaqhokri imibala-blind azichaphazeleki kakhulu, umzekelo ukuba i-avareji okudlala kunye ibhola emhlophe eyahlukileyo akukho ukusuka avareji babo ibhola ebomvu.
Ngoko ke, kubonakala ukuba ngeli xesha na ukuba kungenzeka ukufumana abadlali abaninzi uvavanyo ngamazwe umbala-blind, xa sele umbala-iimfama kwaye ufuna ukufumana kwiklabhu yasekuhlaleni-veki kwi, hamba uze ubambezeleke! Kananjalo imali iperi Oxy-Suomen iiglasi, leyo kuthiwa ukuphucula Imibala nemifuno!
Mandithathe kwakhona ndithi, kukho iimeko ezininzi ezahlukeneyo eziwela phantsi kwegama ngengubo "bomvu-luhlaza lombala-blind", angala protanopia, deuteranopia, protanomaly, kunye deuteranomaly. Ukuba ucinga ukuba ungafika unayo enye yezi meko ke ndingenalo waxilongwa, nceda thetha nogqirha wakho (phambi okanye emva komdlalo) - siyaqhubeka iwebhusayithi leqakamba hayi ezonyango!
tags: Bill Ponsford, umbala oyimfama, Oxy-Suomen, ibhola ebomvu, ibhola emhlophe
11th EyoMdumba 2021
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (145 izimvo)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (43 izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (31 izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
England vs New Zealand: Test First - England Zithi Honours (20 izimvo)Emva kokuqalisa kancinci kumdlalo bagqiba uvavanyo lokuqala ngesantya entanyeni lekhefu namhlanje - yaye yintoni wokusebenza Stuart Broad ukunyusa iflegi ngokwesindlwane. wenza ke kuphela club 20 ...
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (42.9k ukujonga)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (18.8k ukujonga)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Zonke eNgilani entsha, ngaphandle P. (5.5k ukujonga)Kwi weqakamba iindaba inkulu emini England ubhengeze kuphinda Kevin Pieterson uya kuba kwizicwangciso zazo, ngempumelelo nokuphangwa batsman babo phambili. Oku ekugqibeleni izakufunyanwa ukuba ubhale inqaku yam yokuqala ...